Shiinaha Warshad madax-silsilad tayo sare leh iyo alaab-qeybiyeyaal. SAMUEL
Madaxa dhululubo otomaatiga ah
Qalabka saxda ah ee saxda ah ee ku habboon RenaultR4
Crankshaft baabuur oo tayo sare leh ayaa ku habboon RenaultE7J
Baabuur tayo sare leh Flywheel
Kala duwanaansho buuxa oo crankshaft gawaarida gawaarida ah
Madaxa silsiladda oo tayo sare leh
moodeel: Bastoolad bistoolad
Moodooyinka gawaarida la adeegsan karo: Ford FOCUS-DV6 2.2
Barakaca baabuurta: 2.2L
OEN: 908867/1433147/9662378080/71724181 / 0200GW
Tirada dhululubada: 16
sharaxaadda alaabta ：
Waxay ku habboon tahay gawaarida, maraakiibta, gawaarida injineernimada, mashiinnada beeraha, koronto-dhaliye set tayada asalka ah, oo leh muuqaal wanaagsan, cufnaan sare, habsami, dhalaal iyo adkeysi kadib marka la dhammeeyo. Badeecad kastaa waxay soo martay tijaabooyin adag oo tayadeedana waa la damaanad qaaday. Baakadaha sanduuqa ayaa leh muuqaal wanaagsan iyo wareeg wax soo saar waara: 20-30 maalmood oo shaqo, baakado dhexdhexaad ah / baakado asal ah, qaab gaadiid: dhul, bad iyo hawo ah.
Xaaladaha shaqada iyo shuruudaha madaxa silsiladda
Madaxa silsiladdu wuxuu xambaarsadaa culeyska farsamo ee ay keeneen xoogga gaaska iyo adkeynta madaxyada silsiladda, isla mar ahaantaana, waxaa la soo dersa culeysyo heer kul ah oo sarreeya sababtoo ah taabashada gaaska heerkulka sarreeya. Si loo hubiyo shaabad wanaagsan oo dhululubo ah, madaxa dhululubo ma dhaawici karo mana beddelmi karo. Ujeedadaas awgeed, madaxa silsiladda waa inuu lahaadaa xoog iyo adkaansho ku filan. Si loo sameeyo qaybinta heerkulka ee madaxa silsiladda si isku mid ah uguna macquulsan iskana ilaali dildilaaca kuleylka ee u dhexeeya qaadashada iyo kuraasta waalka qiiqa, madaxa silsiladda waa in si fiican loo qaboojiyaa.
Madaxa silsiladda gawaarida ee tayada sare leh:
tusaale Dhululubo bistoolad
Moodooyinka gawaarida lagu dabaqi karo Ford FOCUS-DV6 2.2
Barakaca baabuurta 2.2L
OEN 908867/1433147/9662378080/71724181 / 0200GW
Tirada dhululubada 16
Waxay ku habboon tahay gawaarida, maraakiibta, gawaarida injineernimada, mashiinnada beeraha, tayada asalka ah, oo leh muuqaal wanaagsan, cufnaan sare, jilicsanaan, dhalaal iyo adkeysi ka dib dhammaadka. Badeecad kastaa waxay soo martay tijaabooyin adag oo tayadeedana waa la damaanad qaaday. Baakadaha sanduuqa ayaa leh muuqaal wanaagsan iyo wareeg wax soo saar waara: 20-30 maalmood oo shaqo, baakado dhexdhexaad ah / baakado asal ah, qaab gaadiid: dhul, bad iyo hawo ah.
Waxay ku habboon tahay baabuurta, maraakiibta, gawaarida injineernimada, mashiinnada beeraha.
Hore: Soo saaraha hormoodka u ah Piston Crankshaft - Mishiinka loo yaqaan "Casting Crankshaft for Perkins135" oo leh "Oem Number 31312730" qiimaha waxsoosaarka - SAMUEL
Xiga: Camshaft-dhamaadka sare
Madaxa Silsiladda Gawaarida
Ford Silsiladda Madaxa
Madaxa Silsiladda Gmw
Hyundai Silsiladda Madaxa
Jac dhululubada Madaxa
Koonfurta tuulada Zongshizhuang, Magaalada Zongshizhuang, Jinzhou City, Shijiazhuang City, Gobolka Hebei